धरानको ‘लालकिल्ला’ तेस्रो प्रयासमा तोड्ने तिलक राई को हुन ? «
धरानको ‘लालकिल्ला’ तेस्रो प्रयासमा तोड्ने तिलक राई को हुन ?
प्रकाशित मिति :2December, 2019 2:37 pm
१६ मंसिर, धरान । भोजपुरमा विसं । २०३१ सालमा जन्मेर धरान झरेका कांग्रेस नेता तिलक राई पहिलोपटक ०५४ सालमा घरान– १८ को वडाध्यक्षमा चुनाव लडेर हारे । ०७२ को स्थानीय चुनावमा उनी मेयरमा लडे, त्यहाँ पनि हारे । तेस्रो पटकको चुनावी प्रतिस्पर्धामा उनी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भई छाडे ।
हँसमुख राईले दौरा सुरुवालमा सजिएर सोमबार नै मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट सपथ खाइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसले धरानमा इतिहासकै पहिलोचोटि विजयोत्सब मनाएको छ ।
धरानको मेयरमा ०४८ सालयता नेपाली कांग्रेसले एकपटक पनि जित हात पारेको थिएन । ‘लालकिल्ला’का रुपमा चिनिँदै आएको धरानमा यसपालि एमाले र माओवादी मिलेको अवस्थामै कांग्रेसले फराकिलो मतान्तरमा चमत्कारिक जीत हात पार्‍यो । कांग्रेसका तिलकले २६७०९ मत ल्याउँदा नेकपाका प्रकाश राईले २३९१४ मत पाएका छन् । दुई उम्मेदवारवीचको मतान्तर फराकिलो, अर्थात २७९५ छ ।
को हुन् तिलक ?
मेयरमा निर्वाचित तिलक राई कांग्रेसले ठूला वा चर्चित नेता होइनन् । उनी सामान्य र सरल व्यक्ति हुन् । तर, जनताको विश्वास जित्न ठूलो नेता चाँहिदैन, जनतामा भिजेको नेता चाहिन्छ भन्ने कुरा तिलकले सावित गरिदिए ।
कांग्रेस नेता तिलक राई भोजपुरमा जिन्मएका हुन् । पूर्वगाेर्खा सैनिक पृष्ठभूमिका उनले धरानमै आफ्नो वाल्यकाल बिताए । शिक्षा दीक्षा पनि यहीँ लिए । तथापि उनले एसएसलसी उत्तीर्ण गरेपछि आफ्नो औपचारिक अध्ययन धेरै माथिसम्म लैजान चाहेनन् ।सुनसरीका कतिपय कांग्रेसकै नेताहरुको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने धरानमा तिलक राईको व्यक्तित्वले मात्र यो जित हात लागेको होइन, सत्तारुढ नेकपाप्रतिको धराने जनताको वितृष्णाको समेत प्रतिफल हो तिलक राईको जित । एक स्थानीय नेता त यतिसम्म भन्छन्, ‘धरानमा कांग्रेसले जितेको होइन, नेकपाले हारेको हो ।’
रानमा नातागोताका मानिस र साथीसंगीहरु लाहुरे बन्ने प्रचलन रहे पनि तिलक राईको मन त्यसतर्फ आकर्षित भएन । बरु उनी राजनीति र सामाजिक संघ संस्थाहरुमा रम्न थाले । यही क्रममा उनी किरात राई यायोख्खाको केन्द्रीय अध्यक्षसम्म बने । निवर्तमान अध्यक्ष राईलाई यसपालि मेयरमा जित हात पार्न किरात राई यायोख्खाको संगठित भोटले समेत सहयोग गर्‍यो ।
नेपाली कांग्रेसमा लागेर उनी तरुण दलको धरान अध्यक्ष बने । उच्च शिक्षा नलिएका र तरुण दलको नेता बनेका कारण तिलकलाई कतिपयले गुण्डागर्दी गर्ने जमातका रुपमा हेर्न खोज्नु स्भावाविकै थियो । सम्भवतः यस्तै छवि बनेका कारण ०७४ को चुनावमा उनलाई धरानको वौद्धिक समुदायले स्वीकार्न सकेको थिएन ।
तर, तरुण दलको नेता हुँदा पनि तिलकको व्यक्तिगत स्वाभावचाहिँ अलि फरक थियो, जसले उनको स्वीकार्यतालाई फराकिलो बनाउँदै लग्यो । तरुण दलबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनी विपक्षीहरुसँग पनि नरम, सबैसँग मिलेर काम गर्न सक्ने, विपक्षीविरुद्ध कहिल्यै छुचो प्रतिक्रिया नदिने भलाद्मी व्यक्तिका रुपमा देखा परे । उनको छवि तरुण दलको भन्दा माथि उठ्यो ।
मेयर राईको राजनीतिक यात्राबारे चर्चा गर्दा ०४७ सालबाट उनले राजनीति सुरु गरेका हुन् । ०५७ मा उनी तरुण दल धरानको अध्यक्ष बने । त्यसपछि कांग्रेसको नगरसचिव हुँदै ०७२ देखि अहिलेसम्म कांग्रेसको नगर सभापति छन् ।
धरानको डिपो स्कुलबाट एसएलसी दिएका उनले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आइकमसम्म पढे । सप्तकोशी यातायात व्यवसायी संघको अध्यक्षसमेत रहेका तिलकको व्यवसाय चाहिँ सार्वजनिक यातायात हो । उनीसँग धरान उद्योग वाणिज्य संघको सचिव भएर काम गरेको अनुभव पनि छ । धरानमा प्रायः नेपाली कांग्रेसको पकड रहने गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा पनि तिलक राईले सचिवको भूमिका निभाएर अनुभव हासिल गरेका छन् ।
खेलकुदमा सौखिन राई गल्फ एसोसिएसनको केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत भए । धरानमा प्राय आयोजना हुने गरेको शारीरिक सुगठन (बडी बिल्डिङ) प्रतियोगिताका रेफ्री हुन् ।
सहासी युवा नेताको छवि बनाएका तिलक राईले सर्दु जलाधार क्षेत्रमा भूमाफियाहरुको चलखेल र प्लटिङविरुद्ध बोल्दै आएका छन् । अब धरानको खानेपानीको समस्या र सदू जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने भूमिकामा उनी आफैं आइपुगेका छन् ।
नगर क्षेत्रभित्र गाह्रो साह्रो पर्नेहरुलाई सहयोग गर्ने, स्थानीयवासीमा विवादहरु मिलाउन लाग्ने, प्रहरीसँगको सहकार्यमा सामाजिक कामहरु गर्ने जस्ता कार्यहरुमा तिलक सधैं अग्रस्थानमा हुन्थे । किरात राईको सामाजिक संगठनमा केन्द्रीय नेता बनेपछि उनको संगतको दायरा कांग्रेससँग मात्र सीमित नभएर फराकिलो बन्यो । वामपन्थीहरुले पनि तिलक राईभित्रको शालीनतालाई चिन्न थाले ।
यसअघि वडाध्यक्ष र मेयरमा चुनाव लडेर हारेका तिलकलाई ती दुबै चुनावले स्थानीयवासीमा थप परिचित गरायो । खासगरी ०७४ को चुनावमा तत्कालीन एमालेका तारा सुब्बा र माओवादीका अइन्द्रविक्रम बेघासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेक्रममा तिलक धरानबासीका घरघरमा पुगे, जसले गर्दा यसपटक उनले धरानबासीसमक्ष थप परिचय दिइरहनु परेन ।
नरम स्वाभावका तिलकले धरानमा नेपाली कांग्रेसका लागि एउटा इतिहास रचेका छन् । उनी धरानको नगर प्रमुख बनेका छन् । तिलक राईले यो सफलता आफैं नेपाली कांग्रेसका नेता भएका बेला प्राप्त गरेका हुन् । उनी कांग्रेसका धरान नगर सभापति हुन् । अहिलेसम्म उनलाई नेपाली कांग्रेसले जिल्ला सदस्यसमेत बनाएको छैन । तर, अबको यो जितपछि उनको राजनीतिक यात्राले नयाँ क्षितिजको ढोका उघारिदिएको छ ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका सुनसरी जिल्ला सचिव सुजेन्द्र तामाङले मेयरमा दाबी गरेका थिए । मेयरमा उठ्नकै लागि तामाङले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जागिरबाट राजीनामा समेत दिइसकेका थिए । तर, सुजेन्द्रले तिलकलाई सघाउने भन्दै आफ्नो दाबी फिर्ता लिए ।
कांगे्रेसका सुनसरीका प्रवक्तासमेत रहेका सुजेन्द्र भन्छन्,‘तिलक राईजीको जीतप्रति म अत्यन्तै खुशी छु ।’
वामपन्थीहरुको पेलाइमा पर्दै आएका धराने कांग्रेसीजन यो उपचुनावमा एकजुट बने, यसपालि कसैले पनि अन्तरघात गरेनन् र जित हात पारी छाडे । यस्तो हुनमा तिलकको शान्त स्वाभावले पनि काम गर्‍यो । उनी कांग्रेसका सबै गुटप्रति नरम मानिन्छन् । यो खबर अनलाईखबरमा लेखिएको छ ।